I-WOWOW Brass Bathroom Faucet - Thenga ku-inthanethi ku-Wowow Faucet
Ikhaya / Amanzi okugeza / Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile / WOWOW Igumbi lokugeza ompompi elibanzi le-360 Degree Swivel Brushed Nickel Bathroom Sink Faucet
AMAKHISHINI AMAKHULU AMAKHULU OKUPHAKATHI - Umzimba oyinhloko kanye nesixhumi sepayipi eliyize kwenziwa ngethusi eliqinile, umsebenzi osindayo noqinile. Ukuhlanganiswa komhlangano wokukhipha umbala we-Pop-up ne-cUPC evunyelwe ukufakwa kokufakwa kufakiwe.
INDAWO YOKUXHUMANA YOKUXHUMANA YOKUDALA - Ukuma okukhethekile kwe-"Y" ukwakheka okusheshayo kokuxhuma kulula ukufaka nokugcina imali yamapayipi.
I-360 DEGREE SWIVEL FAUCET - isibambo Double Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile, 3 izingcezu design kuyinto elula ukulawula lokushisa kwamanzi. Ukukhweza okungama-3-hole nge-8-inch design design, ibanga liyakwazi ukuguqulwa ngokwezidingo zakho zangempela.
IDizayini YANAMUHLA - Okujwayelekile kusiphetho se-nickel esenziwe nge-brushed, ukwakheka okuyisipesheli okuphezulu kokudala isitayela esihle sokuhlobisa indlu yangasese. I-WOWOW ingeza ungqimba lokufaka uphawu lwe-glaze ebusweni be-nickel obungamelana nokungcola nokugqwala ekusetshenzisweni kwansuku zonke.
Iwaranti, UKUSEKELWA KWAMAKHASIMENDE - Kunikezwa iwaranti yeminyaka emihlanu kanye nokwesekwa kwamakhasimende. Imbozwe ukubuya kwezinsuku ezingama-5. Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Ithusi lepayipi lokugezela
● Isixhumi esisindayo somzimba wethusi nesixhumi sethusi
Ikhwalithi ye-Premium Quality ye-Bathroom Sink
● NSF 61 (Ukuphuza Imiphumela Yezempilo Yamanzi)
Idizayini ephezulu ye-arc spout yokuqaqa kalula
● Ifakwe i-aerator yekhwalithi ephezulu yeNeoperl
● Kungasuswa ngqo ngesandla ukuze kuhlanzwe ngaphandle kwamathuluzi
● Ubuciko bokuqala bokudala buxhuma ukwakhiwa okulula ukukufaka ngokwakho ngaphandle kweplamba
● Gcina imali yakho yokufaka
Umbala Wokufanisa I-Pop Up Drain Stopper
● Ukwakhiwa okuphezulu kwe-ABS, ukugqwala, nokuklwebheka
● Kukhona isihlungi sebhasikidi esingavimbeli ngaphakathi kokukhipha
Iza nokuQedela Ukufakwa
● 1 x isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sombhede we-nickel ebhulashiwe
● 1 Isethi yezesekeli; 1 x isitishi sokugeza
● 1 x Y yakha ukuxhuma okusheshayo
● Amapayipi wamanzi we-2x 60 cm cUPC
I-SKU: 2320500 Categories: Amanzi okugeza, Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Kugcwele
11.14 x 10.16 x amasentimitha angu-3.19